Izinto zobumba ze-piezoelectric luhlobo lolwazi olusebenzayo lwezinto zobumba ezingaguqula amandla womshini namandla kagesi komunye nomunye. Kungumthelela we-piezoelectric. Ngokungeziwe ku-piezoelectricity, i-piezoelectric ceramics nayo ine-dielectricity, ukuqina, njll., Okusetshenziswe kakhulu ekucabangeni kwezokwelapha, izinzwa ze-Acoustic, ama-acoustic transducers, ama-motors e-ultrasonic, njll.
Izimbumba ze-piezoelectric zisetshenziswa kakhulu ekwenzeni ama-transducers e-ultrasonic, ama-acoustic transducers angaphansi kwamanzi, ama-electroacoustic transducers, izihlungi ze-ceramic, ama-ceramic transformers, ama-ceramic discriminators, ama-high voltage generator, ama-infrared detectors, amadivayisi we-wave acoustic wave, i-electro-optic Devices, amadivayisi wokushisa nokuqothula, ama-piezoelectric gyros, njll., awasetshenziswanga kuphela emikhakheni ephezulu, kepha nasempilweni yansuku zonke ukukhonza abantu nokwenzela abantu impilo engcono.
EMpini Yesibili Yomhlaba, kwatholakala izinto zokubumba ze-BaTiO3, futhi izinto zokwenziwa kophayi kanye nokusetshenziswa kwazo kwenza inqubekela phambili yokwenza inkathi. Futhii-nano BaTiO3 powder yenza kube nokwenzeka ukukhiqiza i-BaTiO3 Ceramic enezici ezisezingeni eliphakeme.
Ekupheleni kwekhulu lama-20, ososayensi bezinto ezibonakalayo emhlabeni wonke baqala ukuhlola izinto ezintsha zokuphehla ugesi. Ngokokuqala ngqa, umqondo wezinto ze-nano wethulwa ekutadisheni izinto zokwenza uphayizo, okwenze ukucwaninga nokuthuthukiswa kwezinto zokwenza uphayizo, into esebenzayo, babhekana nentuthuko enkulu, ebonakaliswe ngezinto. Ushintsho ekusebenzeni ukuthi izakhiwo zemishini, izakhiwo ze-piezoelectric, nezakhiwo ze-dielectric zenziwe ngcono kakhulu. Lokhu ngokungangabazeki kuzoba nomthelela omuhle ekusebenzeni kwe-transducer.
Njengamanje, indlela eyinhloko yokwamukela umqondo wamamitha we-nano ezintweni ezisebenza nge-piezoelectric ukuthuthukisa izakhiwo ezithile zezinto zokwenza uphayizo (engeza ama-nanoparticles ahlukahlukene ukwakha izakhiwo ze-nano ezintweni zophayiphu) futhi (kusetshenziswa ama-nanopowders we-piezoelectric noma amaNanocrystals nama-polymers kwenziwa ngezinto ezihlanganisiwe ngu izindlela ezikhethekile) izindlela ezi-2. Isibonelo, emnyangweni wezinto ezibonakalayo weThanh Ho University, ukuze kuthuthukiswe ukuhlukaniswa kokwehlukaniswa komhlaba kanye nokwehlukaniswa kwensali kwezinto zokwenziwa nge-ferroelectric ceramic, ama-Ag nanoparticles afakwa ukulungiselela "ama-nano-multiphase ferroelectric ceramics based on metal nanoparticles / ferroelectric ceramics"; Njenge-nano alumina (AL2O3) / PZT,i-nano zirconium dioxide (ZrO2)/ I-PZT namanye ama-nano composite ferroelectric ceramics ukunciphisa okokusebenza kwe-ferroelectric yasekuqaleni k31 nokwandisa ukuqina kokuqhekeka; izinto ze-nano piezoelectric nama-polymers ndawonye ukuthola izinto ezihlanganiswayo ze-nano piezoelectric. Okwamanje sizofunda ngokulungiswa kokhokho be-piezoelectric ngokuhlanganisa izimpushana ze-nano piezoelectric ezinezithasiselo ze-nano organic, bese sifunda ngoshintsho kuzakhiwo ze-piezoelectric nezakhiwo ze-dielectric.
Silindele ukusetshenziswa okuthe xaxa kwezinto ze-nanoparticles ezintweni zobumba ze-piezoelectric!